Erlọ ọrụ kristal laser - China laser crystals Manufacturers, suppliers
Anyị na-enye dịgasị elu mma laser kristal, na iche iche kasịnụ, dị iche iche doping ion; nkọwa dịka arịrịọ, gụnyere Neodymium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Nd: YAG) ； Erbium Doped Yttrium Aluminium Garnet (Er: YAG) Iko) wdg, dịgasị nhọrọ na ngwọta nke DIEN TECH nyere.
Nd: YAG kristal mkpanaka na-eji na Laser marking igwe na ndị ọzọ na laser ngwa.
Ọ bụ naanị ihe siri ike nke nwere ike ịrụ ọrụ mgbe niile na ụlọ okpomọkụ, ọ bụkwa kristal kacha arụ ọrụ kacha mma.
Nd, :R: YAG kristal
YAG (yttrium aluminum garnet) laser nwere ike doped na chromium na neodymium iji mee ka absorption àgwà nke laser. NdCrYAG laser bụ steeti steeti siri ike. Chromium ion (Cr3 +) nwere a sara mbara absorption gbalaga; ọ na-amịkọrọ ume ma bufee ya na ion neodymium (Nd3 +) site na ụzọ mmekọrịta dipole-dipole. A na-ebugharị ntụgharị nke 1.064 µm nke laser a.
Ho: YAG Ho3+ ion ndị etinyeworo na mkpuchi kristal mkpuchi egosiputala ọwa 14 na-arụ ọrụ na laser, na-arụ ọrụ na ọnọdụ oge site na CW ruo ọnọdụ akpọchiri. Ho: YAG bụ nke a na-ejikarị eme ihe dị ka ụzọ dị mma iji wepụta 2.1-μm laser emission site na 5I7- 5I8 mgbanwe, maka ngwa dị ka laser ime nchọpụta, ịwa ahụ ahụike, na ịmịpụta Mid-IR OPO iji nweta nsị nke 3-5micron. Direct diode pumped systems, na Tm: Fiber Laser pumped system egosiputela mkpọda arụmọrụ, ụfọdụ na-eru nso na usoro iwu ịgba.
Er: YAG bụ ụdị magburu onwe ya 2.94 um laser kristal, nke a na-ejikarị ya na usoro ọgwụgwọ laser na mpaghara ndị ọzọ. Er: YAG kristal laser bụ ihe kachasị mkpa nke laser 3nm, yana mkpọda ahụ nwere arụmọrụ dị elu, nwere ike ịrụ ọrụ na ọkụ ọkụ ụlọ, ọkụ ọkụ laser dị n'etiti akụkụ nchebe mmadụ, wdg. 2.94 mm Er: YAG laser nwere e ọtụtụ-eji ọgwụ ubi ịwa ahụ, anụ mma, eze ọgwụgwọ.
Ho, Cr, Tm: YAG -yttrium aluminium garnet laser kristal doped na chromium, thulium na holmium ion iji nye lasing na 2.13 microns na-achọta ngwa ngwa ọzọ, karịsịa na ụlọ ọrụ ahụike. Ihe dị mkpa nke kristal kristal bụ na ọ bụ were n'ọrụ YAG dị ka ndị ọbịa. YAG si anụ ahụ, kwes na ngwa anya Njirimara maara nke ọma ma ghọta ihe ọ bụla laser mmebe. Ọ nwere ọtụtụ ngwa na ịwa ahụ, dentistry, nyocha nke ikuku, wdg.
Yb: YAG bụ otu n'ime ihe ndị na-ekwe nkwa laser-arụsi ọrụ ike na ihe kwesịrị ekwesị maka diode-pumping karịa usoro Nd-doped omenala. E jiri ya tụnyere Nd: YAG crsytal, Yb: YAG kristal nwere nnukwu ibu bandwidth iji belata ihe nchịkwa nke chọrọ maka lasers diode, ogologo ndụ laser dị elu karịa, okpukpu atọ ma ọ bụ anọ dị ala na-ebugharị ọkụ ọkụ n'otu nkeji. Yb: YAG kristal na-atụ anya dochie Nd: YAG kristal maka ike dị elu diode-pumped lasers na ngwa ndị ọzọ nwere ike.